Wasiirada Soomaaliya oon saxiixi doonin heshiisyo aysan ogayn Ra’isulwasaaraha iyo garyaqanka Guud. – The Voice of Northeastern Kenya
Wasiirada Soomaaliya oon saxiixi doonin heshiisyo aysan ogayn Ra’isulwasaaraha iyo garyaqanka Guud.
Star FM September 14, 2018
Kadib kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada Soomaaliya ayaa looga hadlay arimo badan oo ku saabsan xaalada dalka Soomaaliya gaar ahaan amaanka,sharciga xakamaynta lacagaha,saxiixyada heshiisyada caalamiga ah,tira koobka hantida qaranka iyo qodobo kale.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa golihiisa wasiiradiisa uga digay inay saxiixaan heshiisyo caalami ah oo aysan la socon xafiiska ra’iisul wasaaraha, garyaqaanka guud iyo golaha wasiirada intaba.
Shirkii golaha wasiirada ee shalay galinkii danbe lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo bandhigay dhibaatooyin dhaqaale oo ka dhashay heshiisyo ay galeen dawladihii hore ee Soomaaliya, waxaana dood dheer kadib la isku raacay in qorshaha lagu saxiixayo heshiisyada caalamiga ah laga sameeyo iskaashi dhinacyo iyo iska war qab si looga gaashaanta caqabadaha ka dhalan kara.
Wasiiru dowlaha xafiiska ra’iisul wasaaraha Soomaaliya C/laahi Xaamud ayaa sheegay in ujeedada ay tahay sidii looga fogaan lahaa dhibaatooyin kale oo laga dhaxlo heshiisyo dawladdu gasho oo saameeya dhaqaalah Soomaaliya iyo qorshaha cafinta daynta lagu leeyahay.
← DHAGEYSO Maxaad ka ogtahay shaqooyinka xafiiska xeer ilaalinta Soomaalia.
DHAGEYSO Barnaamijka Hoggaanka star, Arrimaha Kenya 14-09-2018 →